Madaxweynihii Hore Ee Soomaliya Xasan Sheekh Maxamuud Oo Dhaliilo U Jeediyay Xukuumadda Farmaajo – somalilandtoday.com
Madaxweynihii Hore Ee Soomaliya Xasan Sheekh Maxamuud Oo Dhaliilo U Jeediyay Xukuumadda Farmaajo
(SLT-Muqdisho)Madaxweynihii hore ee Dalkaasi Soomaaliya Xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyay dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo inay wado caburin iyo cabsi gelin, isagoo ku baaqay in wax laga bedelo hab dhaqanka siyaasadda iyo sida ay hadda wax u socdaan.
Isagoo ka hadlayay Munaasabad lagu furiyay xarun uu yeelan doono Xisbiga uu hoggaamiyo ee UDP ayaa waxaa uu ka hadlay xaaladaha uu dalka marayo iyo caqabadaha ay wajaheyso dowladda Federaalka.
“Haddii labada aqal ee sharci dejinta ay leeyihiin sidaan kuma wada shaqeyn karno, haddii dowlad goboleedyadii xubinta ka ah dowladda federaalka ay leeyihiin sidaan kulama shaqeyn karno dowladda dhexe, haddii xisbiyada qaarkood ay ka cabanayaan in la caburinayo, lana baal marayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla, sow ma haboona in habdhaqanka siyaasadda iyo sida wax u socdaan wax laga bedelo”ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Sheekh ayaa soo jeediyay muhiimadda ay leedahay in laga fogaado xaalado kala dhantaalaya cilaaqaadka dowladda iyo shacabka, isla markaana luminaya waqtiga qaaliga ah.
Waa eedeyntii u horeysay ee Xasan Sheekh uu meel fagaare ah ugu soo jeediyo dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo, tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay Muqdisho, isla markaana Hoggaamiye ka noqday Xisbi siyaasadeed ay ku mideysan yihiin Siyaasiyiin iyo Xildhibaano ka tirsan Labada Gole.